विचार/ब्लग – Page3– खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
अफ्रिकी जनतामा रक्तदान उत्प्रेरणा, ईथियोपिया रक्तदान भ्रमण स्मरण
-अर्जुनप्रसाद मैनाली अमेरिका लगायत विश्वका अधिकाम्स नेपाली समुदायमा मेरो सकृय प्रयासले रक्तदान गर्न उत्प्रेरित भई सक्नु भएको छ । रक्तदान कार्यमा संगठीत भई सक्नु भएको छ । अब रक्तदान कार्यक्रमले निरन्तरता पाइ रहनेमा ढुक्कभएको छु । अब मैले विश्वका..
प्रकाशित मिति: ५ फाल्गुन २०७५, आईतवार
-विन्दु आचार्य पौडेल आजकल हाम्रो देशमा घटेका घटनालाइ शुष्म रुपमा नियाल्ने हो भने यो देश एउटा चलचित्र जस्तो लाग्छ । त्यो पनि हिरो बिनाको चलचित्र । अब त हिरो आउला भनेर कुर्यो अन्त्यमा भिलेन कै प्रवेश । यस्तो लाग्छ हाम्रो देशमा अब कहिल्यै हिरोको आगमन हुने छैन..
-गोकुल ढकाल आज शुक्रवार । सप्ताहन्तमा सबैभन्दा ब्यस्त हुने दिन । प्रवासी नेपालीहरुले घण्टा हानेर जीवन धान्न सबैभन्दा ब्यस्त हुनुपर्ने दिन । बन्दोबस्तका जागिर हुनेहरुका लागि पनि द्रब्य खर्चिन कता जानेहोला वा फिक्स्ड भ्याकेशन मनाउन योजना बनाउने दिन ।..
-किशन रेग्मी फेसबुकमा उसको नाम सर्च गरेर हेर्दा उसलाई भेटाएं । तर मलाई छोडेर जाँदै गर्दा आँशुले भिजेका उसका आँखा अत्यन्त खुशीले मुस्कुराई रहेका थिए । मैले यस्तै देखें, उसको तस्विर नियाल्दा । उ संगै उभिएको पुरुष आकृती हेरेर म खुशी पनि भईन, न त दुखी । किनकी म..
- लक्ष्मण सिटाैला मलाई मेरा बाबुआमाले घरमा बोलाउने नाम सुनयना हो । तर फेसबुके नाम चै सुनिता चौहान हो । केही महिना देखि म एउटा केटासग फेसबुके प्रेममा छु । फेसबुके प्रेम फेसबुक जस्तै अस्थायी हुन्छ मैले बुझेको छु । तर बुझ्दा बुझ्दै पनि मैले मेरो मनलाई चै..
रंगाशाला होईन, धर्मशालाहरु बनाऊ धुर्मुस
-मणी भट्टराई ३ अर्ब = ३०० करोड ३०० करोडको १०% ले बर्षको ब्याज = ३० करोड अथवा ३ अर्बको १०% ले प्रतिमहिनाको ब्याज = २ करोड ५० लाख यति पैसा दिन दु:खी र गरीबको लागि हरेक महिना खर्च गर्नु हो भने ? तीस अरबको ब्याज बर्षको ३० करोड धुर्मुससुन्तली फाउन्डेसनले हरेक बर्ष..
-गोकुल ढकाल नेपाली लोक संगीतका चर्चित गायक कुलेन्द्र बिक गतसाल अमेरिका भ्रमणमा आए । यात्राको क्रममा बोस्टन पुगे । आफ्ना साथी नवराज पन्तसंगको भेटमा पन्तद्दारा लेखिएको एउटा गीत लिएर स्वदेश फर्किए । समयको अन्तरालमा पन्तद्दारा लिखित, बिकद्दारा गाईएको..
प्रकाशित मिति: ४ माघ २०७५, शुक्रबार
-अर्जुन राज पन्त दुई नम्बरी संघियता ! भुरे नेता थान्को लाउन ल्याको संघियता थेग्नै गार्हो मुश्किल पारो भयो रमिता शुरुवातनै लाज मोर्दो बेथिति नै सारा थेग्ला जस्तो देखिएन छैन टिक्ने पारा । ढाट्ने लुट्ने कुट्ने भन्दा छैन अर्को धन्दा भन्न थाले अर्कै राम्रो..